Ungqongqe nomjondolo obedle ezikaFaro | IOL Isolezwe
Ungqongqe nomjondolo obedle ezikaFaro
Isolezwe / 4 June 2012, 11:29am /
USALE nabekugqokile uNksz Annie Nkaty wase-Cato Crest eThekwini ngesikhathi kusha imijondolo kwashona nomuntu. Isithombe: SIMPHIWE NGUBANE
IPHELE kabuhlungu injabulo kowesilisa okuthiwa ubeqiwe yizinkamba oshe wangqongqa ezama ukupheka emjondolo eCato Crest, eThekwini izolo ezintatha.
Ubuhangahangu bomlilo obungalawuleki oshise uMnuz Bhekizenzo Ntshangase (34) obeyedwa endlini, ucekele phansi imijondolo nezimpahla okushe kwaba ngumlotha. Omakhelwane yibo abanqande amalangabi bethutha amanzi ngamabhakede. Abantu abebethukuthele bethelwa ngamanzi basole abezicishamlilo okuthiwa bafike ngemuva kwamahora amathathu bebiziwe ngesikhathi kusha.
Omakhelwane bakamufi basole uphuzo oludakayo njengoba bethe uNtshangase ubeqisile ezinkambeni engakaze abuthi quthu ubuthongo kusuka ngoMgqibelo. UMnuz Vumani Khumalo, usomabhizinisi onethaveni nendawo yokudlela, utshele Isolezwe ukuthi umufi ubehla enyuka emgwaqeni ephethe ibhodlela lotshwala. UKhumalo uthe umufi ufike kwakhe ngehora lesithathu izolo ezintatha ezothenga ama-chips ne-russian kodwa wangamvulela.
“Ngimtshelile ukuthi angeke ngikwazi ukumdayisela ngoba sengivalile nomshini wama-chips usuyabanda ngakho angeke ngikwazi ukumfudumezela izinto abezozithenga. Kungalesi sikhathi-ke lapho evele wahamba eseya endlini ekhala ngendlala,” kusho uKhumalo.
Umakhelwane kamufi, uNksz Annie Nkaty ohlala nezingane ezine nabazukulu ababili, uthi kukhale ubumayemaye abantu bezwa uNtshangase ekhala ngosizo esha umlilo usuthungeleke nasemjondolo wakhe.
UNksz Nkaty usale nabekugqokile njengoba ethe uphume ngesamagundane nomndeni wakhe angazi nokuthi bazolalaphi ngoba bashelwe yikho konke abebenakho.
“Kushe yonke into ngisho namaphilisi esifo sofuba kamzukulu wami omncane. Umufi ubephuza futhi ehlala nentombi yakhe emshiye ngoMgqibelo ivakasha kubo e-Eastern Cape. Sisola ukuthi uNtshangase ubezama ukupheka ngemuva kokuchitha ubusuku nabangani bakhe bezijabulisa bephuza,” kulandisa uNksz Nkaty.
Ikhansela lale ndawo eku-Ward 101, uMnuz Ngiba, udlulise amazwi enduduzo kulo mndeni. Uthe uhlelo lokwakhiwa kwezindlu seliyaphothulwa abantu abahlala emijondolo kuleya ndawo ababhalisile sebezofakwa ngononina ezindlini.